ForexCoin စျေး - အွန်လိုင်း FOREX ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ForexCoin (FOREX)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ForexCoin (FOREX) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ForexCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
FOREX – ForexCoin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ForexCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ForexCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ForexCoinFOREX သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0404ForexCoinFOREX သို့ ယူရိုEUR€0.034ForexCoinFOREX သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0307ForexCoinFOREX သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0367ForexCoinFOREX သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.362ForexCoinFOREX သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.253ForexCoinFOREX သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.894ForexCoinFOREX သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.15ForexCoinFOREX သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0536ForexCoinFOREX သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0558ForexCoinFOREX သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.903ForexCoinFOREX သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.313ForexCoinFOREX သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.216ForexCoinFOREX သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹3.03ForexCoinFOREX သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.6.81ForexCoinFOREX သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0553ForexCoinFOREX သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0604ForexCoinFOREX သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.26ForexCoinFOREX သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.281ForexCoinFOREX သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥4.26ForexCoinFOREX သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩47.81ForexCoinFOREX သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦15.36ForexCoinFOREX သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.96ForexCoinFOREX သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.12
ForexCoinFOREX သို့ BitcoinBTC0.000003 ForexCoinFOREX သို့ EthereumETH0.000101 ForexCoinFOREX သို့ LitecoinLTC0.000674 ForexCoinFOREX သို့ DigitalCashDASH0.000396 ForexCoinFOREX သို့ MoneroXMR0.00043 ForexCoinFOREX သို့ NxtNXT2.86 ForexCoinFOREX သို့ Ethereum ClassicETC0.00563 ForexCoinFOREX သို့ DogecoinDOGE11.21 ForexCoinFOREX သို့ ZCashZEC0.000409 ForexCoinFOREX သို့ BitsharesBTS1.53 ForexCoinFOREX သို့ DigiByteDGB1.47 ForexCoinFOREX သို့ RippleXRP0.131 ForexCoinFOREX သို့ BitcoinDarkBTCD0.00135 ForexCoinFOREX သို့ PeerCoinPPC0.139 ForexCoinFOREX သို့ CraigsCoinCRAIG17.9 ForexCoinFOREX သို့ BitstakeXBS1.67 ForexCoinFOREX သို့ PayCoinXPY0.686 ForexCoinFOREX သို့ ProsperCoinPRC4.93 ForexCoinFOREX သို့ YbCoinYBC0.00002 ForexCoinFOREX သို့ DarkKushDANK12.59 ForexCoinFOREX သို့ GiveCoinGIVE85.01 ForexCoinFOREX သို့ KoboCoinKOBO8.8 ForexCoinFOREX သို့ DarkTokenDT0.0372 ForexCoinFOREX သို့ CETUS CoinCETI113.34
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 06 Aug 2020 19:05:01 +0000.